Kedu oke egwu dị na windo oval nke dị n'ime obi nwa ọhụrụ?
Mepee windo oval na obi nke ụmụ amụrụ ọhụrụ
Na nwa gị n'oge ultrasound dọkịta ahụ hụrụ windo oval nke dị n'ime obi. Kedu ihe nchoputa a pụtara na ọ dị ize ndụ maka nwa? Enwere ike igosipụta windo oval maka ụmụ amụrụ ọhụrụ ma ọ ga - ewe oge ole ọ ga - ewe? Anyị ga-ekwu banyere ihe a niile taa.
Mgbaàmà na-anọghị. Echiche abụọ banyere nsogbu ahụ. Gịnị ka m kwesịrị ime?
Otu windo oval na-emeghe bụ ntakịrị anomaly nke obi, nke na-ekwurịta okwu n'agbata aka ekpe na aka nri dị iche iche ma ọ bụ chebe ya kpamkpam, nke bụ ihe okike maka oge nke intrauterine development. Mgbe nwatakịrị ahụ na-ebute ọbara site na window windo buru ibu, nke mbụ, mpaghara brachiocephalic. Nke a dị mkpa iji nọgide na-enwe ọganihu ngwa ngwa nke ụbụrụ. Mgbe a mụsịrị nwa, onye gụsịrị akwụkwọ nke nrụgide n'etiti atria na-agbanwe site na nsị mbụ nke nwatakịrị ahụ, nakwa n'ọnọdụ kachasị mma, usoro nke ijikọta ọnụ ọnụ valvụ ahụ na oghere ahụ. N'ebe ọkara nke ọkara nke afọ nwa ọhụrụ, a na-emechi windo oval. Ma ọ dịghị eme onye ọ bụla. Dị ka ọtụtụ ndị dere, site n'afọ mbụ nke ndụ, windo oval na-emechi nanị 50-60% ụmụaka; kwenyere na ọ nwere ike ịbịaru nso n'oge ọ bụla nke ndụ mmadụ. Dika isi akwukwo di iche iche si kwuo, windo oval na-ekpuchi ekpughere n'ime 17-35% nke ndi okenye.
N'ọtụtụ ọnọdụ, windo oval na-emeghe nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe mgbaàmà, ọ na-esiri ike ịchọpụta ụfọdụ nkpughe ụfọdụ. Onye isi ike n'ozuzu nwere ike iche na anomaly obi a ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ:
Mgbe ụkwara, ịkwa ákwá ma ọ bụ ịchụso ahụ ike, karịsịa ihe atụ, cyanosis pụtara, i. na-acha anụnụ anụnụ (ọbụna obere) nke egbugbere ọnụ ma ọ bụ triangle nasolabial;
na-aga n'ihu na-ebutekarị ọrịa catarrhal na ọrịa mkpali nke usoro bronchopulmonary;
e nwere ihe ịrịba ama nke ịkwụsị mmepe anụ ahụ, obere ntachi obi na-emega ahụ, karịsịa na ngosipụta nke ọrịa nkuku ume ma ọ bụ mmebi iku ume;
enweghi ihe omuma, enweghi ike, ihe mgbaàmà nke mmeghari uche (karịsịa ndi na-eto eto).
Echiche abụọ banyere nsogbu ahụ
Ọbịbịa nke iji chọpụta ọrụ nke obere obere anomaly dị ka windo oval na-emeghe n'ime obi nke ụmụ amụrụ ọhụrụ bụ taa enweghị isi. Ruo n'oge na-adịbeghị anya, echiche dị iche iche banyere windo oval na-emeghe na-emetụtaghị ya kpamkpam, a na-ewere nke a dịka ọdịiche nke usoro. Ruo ugbu a, ndị na-akwado ọnọdụ a kwenyere na enweghi mmerụ nsogbu hemodynamic ọ bụla a chọrọ.
Uzi obi nke nwa amuru - windo oval na-emeghe
Otú ọ dị, enwere echiche ọzọ na-ezo aka na o nwere ike ime ka nsogbu obi ọjọọ nke nsogbu a "dị ọcha." Nke mbụ, anyị na-ekwu okwu gbasara ihe atụ na-adịghị mma na mmepe ọnọdụ hypoxemic. Ihe kacha mkpa dị na njirimara nke windo oval na-emeghe nke ndị na-eme egwuregwu na-enwe nnukwu anụ ahụ na nke mmetụta uche na-egosi na ike na olu. Ekwesiri ighota na mmepe nke ime ihe ngbagha puru ime omume n'egwuregwu ndia ebe eji eme ihe na - eme ihe - ihe ngba elu, ntimikpu egwuregwu, mgba.
Ọ bụ ihe okike iji jikọta windo oval na-emeghe mepee na anomaly nke ọzọ - arialal aneurysm, nke bụ ihe kpatara ihe ize ndụ kpatara mmepe nke nsogbu cardioembolic. Ihe na-emegharị ihe na-ebuwanye ibu na-eme ka o nwekwuo ihe ịga nke ọma na-atụba mkpụrụ ndụ ihe oyiyi si n'aka nri dị n'aka ekpe, ya bụ, mee ka ihe iyi egwu na-adabawanye.
Kedu ihe m kwesịrị ime?
Ụzọ kachasị maka ịchọta windo oval na-emeghe bụ ihe echocardiographic na-emepụta nke echocardiographic nke obi. Ikekwe okwu bụ isi nke a ga-ekwurịta maka dọkịta bụ ihe kwesịrị ịbụ usoro omume ndị nne na nna ma ọ bụrụ na nwatakịrị nwere nke a?
Nke mbụ, ịkwesịrị ịchọta onye na-ahụ maka ọrịa ụmụaka, mee ka ya na ya nọrọ mgbe niile. Site n'oge ruo n'oge (otu ugboro n'afọ) na-emegharị nchọpụta, gbadoo window nke oval. Ọ bụrụ na ha amalite ibelata (ọtụtụ mgbe karịa, ọ na - eme) - ebube. Mgbe nke a anaghị eme, ị ga-edozi nsogbu ahụ na ọkachamara, ihe ọzọ ị ga-eme. Ngwọta nke oge a na windo awara oghere na-atụ anya mmechi mmechi nke transcatheter nke oghere nwere ngwaọrụ pụrụ iche.
Ime ka ahụike nke ụmụaka sikwuo ike
Ihe ize ndụ nye ụmụaka ụmụaka egwuregwu ụmụaka
Otu esi emeso adenoid maka umu ndi ogwu
Nwa ahụ nwere oké ahụ ọkụ - gịnị ka ọ ga - eme?
Ihe na-emerụ ahụ: otu esi emeso ya, ọ bụghị ịda ọrịa
Gini mere nwatakiri ahu ji enwe oke?
Kedu ụdị dọkịta m ga-eji soro nwa?
Gini mere ụmụ ọhụrụ ji emegharị mgbe ha mụsịrị nwa?
Oatmeal porridge weere n'ime oven
Stewed kabeeji na poteto
Mee ka ikuku ima di n'ulo
Njirimara bara uru nke folic acid
Ije ije na ndụ dị mma
Ndị na-agba ịnyịnya Teddy
Kedu mgbe ọ ka mma ịtụrụ ime?
Imepụta ime ụlọ nke ime ụlọ dị na ụdị kpochapụ
Audrey Hepburn. Akụkọ nke ọkọlọtọ
Salad si suluguni na mkpụrụ vaịn
Pancake achicha na strawberries
Oge nri kabeeji oge ochie
Otu olu mara mma bụ nrọ ma ọ bụ eziokwu
Snow na-amụmụ ọnụ ọchị na-amụmụ ọnụ ọchị n'enweghị ịga ụlọ nrịị
Compote si cherry plum